ဆရာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို တားမြစ်ပေးဖို့ ပြည်သူတွေလိုလား — မြန်မာဌာန
လက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေကို စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေက ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်မှုနေရချိန်မှာ သြဇာတိက္ကမကြီးမားတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတွေဖက်က ဝင်ရောက်ရပ်တည်ပြီး အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကို မိန့်ကြား တားမြစ်သင့်တယ်လို့ ပြည်သူတွေ နဲ့ ဆရာတော် အများအပြားက ရှုမြင်နေကြပါတယ်။
စစ်တပ်နဲ့ အရပ်ဘက် ၂ ခုလုံးအပေါ်မှာ သြဇာတက္ကိမကြီးမားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကို ပြည်သူတွေက နှစ်စဉ်တရားသဘင်တွေမှာ ကြည်ညိုစွာနဲ့ နဝကမ အလှူငွေအဖြစ် ကျပ်ငွေထောင်ပေါင်းများစွာ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလို ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်မှုတွေကို စစ်ကောင်စီက ကျူးလွန်နေချိန်မှာ အဲဒီဆရာတော်ကြီးတွေက နုတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ မသင့်တော်ပါဘူးလို့ လက်ရှိ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ရွှေဝါရောင် ဆရာတော်တပါးက မိန့်ကြားပါတယ်။
“အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ မပြုတ်မချင်း ဦးဇင်းတို့ကတော့ နေ့စဉ်ထွက်နေမှာပါပဲ။ အခုဖြစ်နေတာက ဖြိုခွင်းတာမဟုတ်ဘူး သက်သက်မဲ့ပြည်သူတွေကို အညှိုးကြီးကြီးထား ပစ်သတ်နေတာ။ ဒါ လုပ်ကိုမလုပ်သင့်ဘူး လက်လဲမခံနိုင်ဘူး ။ အခုဆရာတော်ကြီးတွေက ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေဘက်က မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်စေချင်တယ်။ တုံ့ပြန်ဖို့ ဝန်လေးနေတယ်ဆိုတော့လဲ သူတို့ကလဲ နဂိုထဲက ဒ်ီဆရာတော်ကြီးတွေကို လာဘ်လာဘတွေ ဆရာတော်ကြီးတွေ သဘာကျအောင် လုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ ဆရာတော်ကြီးတွေ သိပေမယ့်လဲ ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်မပြောတာက ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲ”
ပိဋကတ် ၂ ပုံခွဲ အာဂုံဆောင်တဲ့ မန္တလေးက အရှင်ပညိဿရာလင်္ကာရကလည်း-
“စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခံရတယ်။ အဲဒီလို ပြည်သူတွေ အတိဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ပြည်ပြည်သားတွေ တကယ်ကိုးကွယ် အားထားကြတဲ့ နာမည်ကျော် ဆရာတော်ကြီးတွေက မေတ္တာရပ်ခံချက်တွေ ကြေညာစာတွေထုတ်ပြီး တားမြစ်တာ လုပ်သင့်တယ်။ တိုင်းသူပြည်သားတွေက ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကို သိပ်ပြီး ကြည်ညိုအားထားကြတာ နှစ်သစ်ကူး တရားပွဲတော်မှာဆိုရင် ပြည်သူပြည်သားတွေက မိမိတို့နွမ်းပါးတဲ့ကြားကနေ သိန်း ထောင်ချီပြီး စုပေါင်း လှူဒါန်းကြတယ်။ အဲဒီ ပြည်သူပြည်သားတွေ ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေက ပြည်သူတွေ အတိဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာ ရပ်ဖို့ မင်းကျင့်တရား ၁ဝ ပါးမှာပါတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ မဆန့်ကျင်ဖို့ နှိပ်စက်တာ မလုပ်ဖို့ အဲဒီလိုဓမ္မဘောင်အတွင်းကနေ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားတာတွေ ဆုံးမဟောပြောတာတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ ဦးဇင်းမြင်တယ်။ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ချိန် နှုတ်ဆိတ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ Generation Z မျိုးဆက်သစ်လေးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘာသာအပေါ်ယုံကြည်မှု၊ သံဃာပေါ်အားကိုးမှု သာသနာတော်ပုံရိပ်တွေ ပျက်သွားနိုင်တယ်လို့ ဦးဇင်းမြင်တယ်။”
လက်ရှိ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်မှုမှာ ပါဝင်နေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးဖြိုးဇေယျာသော်ကလည်း -
“နိုင်ငံတော်မှာ အရေးအခင်းတွေပေါ်လာတိုင်း ဆရာတော်တွေ လက်မနှေးခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉ဝ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၂ဝဝ၇ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ့ဖက်က စွမ်းစွမ်းတမန်ပါဝင်ရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်။ အခုအခြေအနေက နိုင်ငံတခုလုံးရဲ့ အနာဂတ် မျှော်လင့်ချက်တွေ ရိုက်ချိုးပြီး စုံးစုံးမြုပ်သုညကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခြေအနေပါ။ အခုကာလမှာ ဆရာတော်ကြီးတွေ အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် တခုခုတော့ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ သင့်တယ်လို့ ထင်တယ် ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ မျှော်လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်က စစ်တပ်ရဲ့ လူမဆန်ရက်စက်မှုတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကျဆင်းစေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
Min Aung Hlaing and military coup are not buddhism?
We like to urge the Buddhist monks to desist the military is killing the people in Myanmar.
STOP KILLING THE PEOPLE